UZhora - Ikati lasekhaya laseMessina
Amehlo obuqili be-feline nothando oluningi ngefomethi yekati.
Izinyane lekati laseYurophu ngesimo esidabukisayo nenhle, UZhora uyindidane emnandi futhi emnandi enombala ocwebezelayo onsundu omnyama namehlo akhanyayo nakhanyayo.
UZhora: ikati elitholakele lehla ezincekwini ezingcwele zaseGibhithe
UZhora kungukuthi isonto di Messina kusukela kwabakhulu ukudlala nokuphila. Ugcwalise impilo yomngani wakhe ongumuntu uJulia iminyaka eyisithupha, selokhu watholakala futhi wamukelwa. Kungokwe- Uhlobo lwe-European feline, kuvame kakhulu e-Italy futhi unesici esibaluleke kakhulu: Ikati laseYurophu eqinisweni kwehla kubantu bakudala Amakati angcwele aseGibhithe.
Ukuzimela nomlingiswa othandekayo: UZhora uyazi ukuthi angazenza athandwe kanjani
Ezimele futhi ezimele, i-Zhora is aikati ethandekayo ongakhathazwa kalula, kodwa owazi ukuthi uyakwazi ukubonisa uthando olukhulu. Eqinisweni, ulala ubusuku nobusuku nenkosikazi yakhe futhi uhlala nayo njalo. Uyakwazi ukumduduza nsuku zonke.
Njengawo wonke amakati, uZhora ungumuntu onobuqili, onobuqili futhi uyadlalwa
Il isonto I-European inezici eziningi ezenza iphelele isilwane. UZhora ulingana ngokuphelele nalolu hlobo: lunye ikati elimnandi futhi engenankinga ngezimfanelo eziningi kakhulu ezimenza abe ngumdlali odlala naye ophelele.
Imvelo enemibhalo nokuzimela
Ukuba ne isilwane ingashintsha impilo yakho impela. Futhi yilokho okwenziwe nguZhora nomlingani wakhe ongumuntu uJulia, okwathi ngemuva kweminyaka eyi-6 angabe esakwazi ukwenza ngaphandle kwenkampani yakhe. Uyakwazi ukumduduza, agcwalise izinsuku zakhe ngokumamatheka nokuhlekisa okuhle. UZhora ungaphezu kwe-a isonto: umuthi wokuphila kahle.
Ikheli: Nge-Olimpia, 4c
I-POSTAL CODE: 98168